Khubaza abalandeli be-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
NgoJanuwari 26, 2019 0 IiCententarios 877
Ukuthandwa kunye nokufikelela ukufikelela kwizigidi zabantu zezinye zeempawu u-Instagram anazo. Kwaye ukuba bayiguqulele kwinethiwekhi yoluntu enomdla, ethathelwa ingqalelo ngabasebenzisi bayo, yonke imihla thatha iiyure ezininzi zosuku lwakho Kule sicelo. Ukuba ufuna ukuzinika ikhefu, okanye mhlawumbi awunamdla wokusebenzisa eli qonga, kukho indlela yokukhubaza Instagram Okwethutyana, ngaphandle kokuba uchithe ixesha elininzi. Xa usenza lonto Akukho mntu unokufikelela kumxholo wakho okanye kwiprofayile yakho, kwaye ungayenza kwakhona xa ufuna ngokuvula kwakhona kule nethiwekhi.
Ngokungafaniyo nezinye iinkonzo eziphatha umxholo wentlalo, yenza esi sigqibo ngaphakathi Instagram Asiyonto enyanzelayo ukuba undwendwele ezona ndawo zikude kakhulu zeli qonga. Kodwa kunjalo, njengoko kwenzeka xa sifuna Cima iakhawunti ye-Facebook, ukucima yonke imisebenzi yakho ye-Instagram yinto ekufuneka ucinge kakuhle, uthathela ingqalelo ukuba yinto onokuthi uzisole ngayo kamva. Gcina ukhumbula ukuba zininzi iingcali ezilwela ukugcina iiakhawunti zazo zisebenza kunye nokuthintela iqonga ngokwalo ukuba lingabavaleli ngokophula imigaqo-nkqubo yalo.
Siyakuxelela indlela yokuvula i-Instagram.
Yintoni eyenziwa ngu-Instagram?
Le nkqubo ifuna kuphela ukuphendula kwimfuno yokuhamba kude kunxibelelwano lwentengiso okwethutyana okanye ungabhalisi, ukubonelela amathuba amabini kumsebenzisi ukuze ukhethe eyona ilungele ityala lakho, enye yazo kukucima iakhawunti yakho, eya kuthi isuse umkhondo womsebenzi wakho kwi-Instagram, kubandakanya iifoto, iividiyo kunye nayo nayiphi na into epapashiweyo, enye indlela kukhubaza iakhawunti yakho okwethutyana, ukuthintela abanye abasebenzisi ekubeni bangene kwiprofayile yakho. Amagqabantshintshi kunye no "Like" ziya kufihlwa, ude ubuyele kwi yenza i-Instagram yakho.
Izisombululo zokungasebenzi kwi-Instagram
Nangona i-Instagran sesinye sezicelo ezibonelela kakhulu kubasebenzisi bayo, apho banokuthi baveze iimvakalelo, iimvakalelo, bathuthela bodwa baye kwiindawo abangazaziyo, sondela kwaye wabelane ngakumbi nabahlobo, amava akho anokuchaphazeleka okanye mhlawumbi angabi mhle ncam, ngezizathu ezahlukeneyo. Ukuba ityala lakho kukuba unengxaki nabalandeli bakho, isistaki, baphula ubumfihlo bakho okanye ubukele Umxholo ongawuthandi. Kukho izixhobo ezininzi ezikunika i-Instagram ukusombulula imeko yakho. Ezinye zazo zezi:
Amandla okuba vimba abasebenzisi be-Instagram uyafuna akukho mda. Kule nethiwekhi, i-cyberbullying inokuboniswa ngokulula, njengoko umxholo kawonke wonke onemifanekiso ekhubekisayo isetyenziswa ngokubanzi ukuhlukumeza amaxhoba ayo. Ukuba ityala lakho liyafana, ungamvimba lomntu kwaye abasayi kuba nakho ukufikelela kwiakhawunti yabo baye kweyakho, oku kubandakanya ukuba abayi kuba nakho ukubona, ukugqabaza okanye ukunika "Njengo" kwiifoto okanye kwiividiyo zakho.
Misela iakhawunti yakho kunye nezikhundla ngasese. Kwimeko apho unabalandeli abacaphukisayo okanye ubayo umxholo kwaye Ukushicilela kwakhona kwinethiwekhi yabo.
Unokukhetha ukususa indawo, ukuze kungabikho mntu ufumanise ukuba uhlala phi, iindawo ozihlala rhoqo kunye neziko onalo, Ngale ndlela abayi kukwazi ukuyisebenzisa kakubi loo lwazi. Kukho ithuba lokumisela i ikhamera yeselula yakho ukuze ingagcini indawo yokuhlala kwifoto nganye.
Unokuxela abantu okanye umxholo ocinga ukuba ayilunganga. Ngale ndlela abayi kuphinda bavele kwi-Instagram yakho.
Amanyathelo okukhubaza i-Instagram
Ndingayenza iakhawunti yam kwisicelo se-Instagram? Ngokuqinisekileyo akunjalo, nangona le nkqubo ilula kakhulu kwaye ingakuthathi ngaphezulu kwemizuzu embalwa, inemeko engacacanga efuna ukuba uyenze kwisiphequluli sefowuni okanye ikhompyuter. Ukwenza oku, kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Ngena ibha yedilesi "instagram.com" Ukufaka ukhetho lokuhlelwa kweprofayili. Khumbula ukuba kuya kufuneka ukwenze nasiphi na isikhangeli, kuba ngokuthe ngqo kwisicelo akunakwenzeka khubaza i-Instagram.
Yiya kwiprofayile yakho
Nje ukuba iwebhusayithi ichongiwe, cofa iqhosha elibonisiweyo kunye ne icon yomntu ephezulu, enika ukufikelela kwiprofayile yakho. Kanye ngaphakathi, kuya kufuneka ucofe ukhetho kwi "Hlela inkangeleko" okulandelayo kwigama lakho lomsebenzisi. Sikwaxelele nokuba njani Khuphela amabali amadala kwi-Instagram.
Ngelixa kwiphepha lokuhlela iprofayili, skrolela ezantsi ngasekunene, emva kwebhayoloji kunye nenye idatha yobuqu, de ufumane ikhonkco elibiziweyo; "Vala iakhawunti yam okwethutyana". Cinezela eli qhosha, kwaye uqhubeke ukhethe ukhetho kwimenyu eyehlayo elandelayo Kutheni ufuna ukukhubaza iakhawunti yakho? kwaye ukhusele iphasiwedi yakho kwakhona. xa ukhethe isizathu kwimenyu, ukhetho lokwenza iakhawunti yakho luza kuvela.
Ngoku, kufuneka ucofe ukhetho Khubaza i-akhawunti okwethutyana kwaye ungene ukuze uyikhuphe.
1 Yintoni eyenziwa ngu-Instagram?
2 Izisombululo zokungasebenzi kwi-Instagram
2.3 Susa indawo
3 Amanyathelo okukhubaza i-Instagram
3.1 Yiya kwiwebhu
3.2 Yiya kwiprofayile yakho
3.3 Yenza ukungasebenzi
NgoJanuwari 26, 2019
Qhagamshela i-Instagram kwiphepha le-Facebook
Cima iakhawunti ye-Instagram